Liiska Alaabada Ganacsi Liiska Gabdhaha Doll Set
Soo-koobista Talo-soo-saarka Soo-iibsiga Iibso Dhallaan jinsi dhab ah
Ku soo dhowow Xarunta Talo-soo-saarka Alaabada Galmada Doll ee dukaanka urdolls. Waxaan isku soo ururinay noocyo kala duwan oo caruusadaha caruusadaha ah si ay kuugu fududaato. Waxay lahaan karaan isku mid. Laakiin mid kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah, mid walba caruusada galmada dhabta ah waxay leedahay astaamo u gaar ah. Haddii aad tahay qof leh dhibaatooyin xagga doorashada ah, waxaa laga yaabaa in halkan kaa caawin karo. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ka hesho dhammaan moodooyinka iswada jaan qaada iyo noocyada dukaanka urdolls. Moodelladan ayaa la kormeeraa oo la ansaxiyaa marka laga helo bakhaarka. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad si taxaddar leh u doorato caruusaddaada jacaylka. Tani had iyo jeer ma fududa, waxaanan kugu soo bandhigi karaa doorashadan halkaan ka adag.
iidda cheap brand Inta badan La Iibsaday
Liiska lagu taliyay
Doll Doll Ka Weyn Suurtagalnimada Shakhsi ahaaneed
In kasta oo ay jiraan waxyaabo kale oo jacayl ka sokow galmada saafiga ah, caruusadaha jacaylku si dabiici ah ayey u leeyihiin siil iyo dabada. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay af afkeeda iyo mararka qaarkood xitaa ilkaha. Waxaan jeclahay sida ay u waalan yihiin ee aan looga gudbi karin. Aad baan u nasiib badnaaday markaan arko iyagoo sakhraansan. Waxay tiri. Ku soo biir kooxdeena taageerayaasha oo na sii feejignaan dheeraad ah, waxaadna heli doontaa waqtiga ugu fiican ...
Haweenka dhabta ah
Ciyaaraha Galmada Waxay Bedelayaan Haweenka Dhabta ah
Xitaa waxaa jira sheegashooyin ah inaan gaari doonno meesha ay caruusadaha galmada ku beddeli doonaan haweenka dhabta ah, maxaa yeelay caruusadaha jinsiyeed waxay noqdeen kuwo runta ku dhisan oo aan mar dambe laga sooci karin dumarka dhabta ah muuqaal ahaan. Markaad aragto tirada badan ee ikhtiyaarrada ah ee la heli karo, ma banaana qalad khalad ah. Macno malahan waxa ka dhigaya dheecaanka dheecaanka, waxaad ka heli doontaa halkan. Suc ...
Muuqaalka Yar ee aadka loo doonayo ee 'Doll Doll'
Badanaa, markaan maqalno ereyada "raqiis" ama "raqiis" markaan fiirineyno caruusadaha galmada, waxaad qiyaasi kartaa inaad hesho 90skii caruusadaha qarxa ama qaar ka mid ah caruusadaha galmada ee raqiiska ah inay kala dhacaan markii ugu horreysay ee la adeegsaday. Tusaale ahaan, waad u adeegsan kartaa shey kalifaya, waxaadna ku ridi kartaa saxaarad, keychain, ama taleefan casri ah. Ma dhici doono wax dheeraad ah, muuqaalka yar ee dhabta ah ee ...
Kuwa Kale Ka Yaabi
Doll Dhab Ah Oo Jinsi Ah Markasta Diyaar U Ah Inuu Ka Cajibiyo Kuwa Kale
Qalabkani waa mid ku habboon in milkiilaha la siiyo dareen dhab ah oo wehelnimo, iyada oo u oggolaanaysa caruusadaha galmada inay si dhab ah uga falceliyaan galmada. Waxay had iyo jeer diyaar u tahay inay ka yaabiso dadka kale oo ay muujiso xaaladdeeda ugu fiican markasta. Maanta, waxay xiratay lebbiska ay jecel yihiin taageerayaasheeda waxayna siisay xarig xiise badan. Nooc kastoo dumar ah oo kuusoo jiidan doonta, waad awoodaa ...
Jawaab celin Doll ah oo jinsi ah oo ka timid Macaamiisha ku qanacsan
Waxay kuxirantahay nooca, way istaagi kartaa oo waxay leedahay awood ku filan gacmaha iyo gacmaha si ay ula jaanqaado walxaha. Waxaad dooran kartaa casriyeyn si aad u hubiso in caruusadaada galmada xitaa istaagi karto iyadoon hoos u dhicin. Iyada oo leh caruusad jacayl oo casri ah, waxaad ku dhisi kartaa xiriir run ah oo farxad badan sanado badan. Midkoodna ma saameynayo tayada. Maalin kasta waxaan helnaa positiv ...
Nooca saxda ah
Dhalmada dhabta ah ee loo yaqaan 'Sex Doll' ayaa doorata nooca saxda ah ee gabadha ay jeceshahay
Kaliya fiiri timaha badan ee aan u hayno Jaceylka caruusadaha. Gabadha saxda ah ee riyadaadu waa cidda ay caruusadu la kulanto markay guriga yimaadaan. Waxaad dooran kartaa nooca saxda ah ee gabadha aad jeceshahay. Ma waxaad tahay nooca ragga jecel gabdhaha burka leh ee maqaarka madow? Waxaa laga yaabaa inaad tahay nooc ka mid ah kuwa jecel xayawaannada yaryar ee xayawaanka ah. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshid waxyaabaha soo socda oo aad xasuusato haddii aad ...
Doll Gabar Dhab Ah
Doll-ka dhabta ah ee loo yaqaan 'Sex Doll' ayaa loo adeegsadaa in lagu abuuro heerka ugu sarreeya ee farxadda aadanaha
Waxay ahayd markaa tikniyoolajiyadda casriga ah si loo abuuro heerka ugu sarreeya ee raaxada abid soo maray aadanaha. Xaqiiqdii, waxaan qaabeeyay dhamaan tallada qeybta boggan, kaas oo ku bari doona sida loo nadiifiyo, loo qariyo, loo labisto, iyo xitaa kaliya talo guud oo ku saabsan sida ugu badan looga faa'iideysto caruusadaha waaweyn. Waana wax aad uga badan masturbator-ka kharash gareeya ...
Saxaabadaada Doll ee dhabta ah ee kuxiran waxay ku qancineysaa Fantasy-kaaga Galmada
Waad gashan kartaa, sameysan kartaa oo naqshadeyn kartaa boombalahaaga galmada iyada oo loo eegayo doorbidkaaga. Marnaba kaa horimaan mayso ama kuu muujin mayso rajo weligeed ah sida naag dhab ah. Waxaad bilaabi doontaa inaad lumiso hurdo ilaa aad ka hesho mid ka mid ah! Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo ah caruusadaha galmada ee loo yaqaan 'TPE dolls' si aan u helno lamaanahaaga kuugu habboon una qancino riyadaada galmada. Waxaan leenahay qaabab kala duwan iyo qiimayaal aan ku dhigno y ...
Dolls dhab ah oo Dumar ah
Ku raaxayso Waxyaalaha ugu Funni-ga badan Doll Wasmo dhab ah
Caajis iyo macno la’aan. Waxay jeceshahay inay ku raaxeysato waxyaabaha ugu qosolka badan taageerayaasha una sheegto sida ay dareemeyso. Qofna uma maleynayo inay la seexdeen aadanaha inta ay qaateen mid ka mid ah caruusadaha. Nasiib wanaagse, adeegsiga aaladani waa wax la soo dhaafay. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan ku caawin karo, markaa fadlan xor ayaad ii tahay inaad i weydiiso waxa aan u maleynayo ka hor intaanan iibsan caruusad. Marka aan helo caawimaad, ma ...
Dhaqdhaqaaqa dhabta ah
Caruurtaada Jacaylka ahi Waxay Gaadhi Kartaa Dhaqdhaqaaq Dhab ah
Caruusadan dhabta ah Dabcan, waad u habeyn kartaa muuqaalka muuqaalka caruusadda galmada sida aad rabto iyo fikradahaaga. Boombalada ayaa horay looga sameeyay silikoon. Shirkadaha kale waxay ogaadeen in TPE ay tahay qalab wanaagsan. Kuwani waa elastomers thermoplastic, markaa jacaylkaaga jilicsan wuxuu gaari karaa dhaqdhaqaaq dhab ah. Dad badan ayaa arkay oo ka fikiray khiyaaliga galmada xitaa wi ...
Dadnimo Dhab Ah
Caruusadaha Robotku waxay si mugdi ah ugu egyihiin Aadanaha dhabta ah
Waxay ku nooshahay baarka, qoob-ka-ciyaarka waxayna ku jirtaa caafimaad iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada. Uma muuqato inay guursaneyso, laakiin taasi kama hor istaageyso inay hesho galmada ugu runta badan. Badanaa waxay leeyihiin laba dalool, iyo laga yaabee saddex haddii ay nasiib leeyihiin. Kuwan caruusadaha astaamaha ah ee loo yaqaan 'robot sex' waxay si muuqata ugu eg yihiin aadanaha dhabta ah. Wax walba waxay ku saabsan yihiin caruusadaha galmada ugu fiican qayb kasta. Fro ...
Siyaabo Kala Duwan
Sahlo Dollsyada Galmada Si Aad Uqaadatid Mawduucyo Kala Duwan
Waxaad ka dooran kartaa nooca caruusadda jinsiga aad jeceshahay ka soo qaad buuggaaga ballaaran. Caruusadda jinsiga waxay asal ahaan ka timid Japan waxaana naqshadeeyay Warshadaha Oriental ee Japan dhammaadkii qarnigii la soo dhaafay. Caruusadda jacaylku waa mid noolol badan, ilaa hadda khiyaanee! Ragga ma aysan ogaan kor u kaca caruusadaha isdaba jooga ah. Maalin kasta way sii kordhayaan. Caruusadaha galmada waxay noqonayaan ...
Aad u kordhay
Daboolida Warbaahinta ee Showga caruusadaha galmada ayaa si aad ah u kordhay
Marka ugu horeysa ee aad asxaabtaada u barato caruus jacayl, waxaa laga yaabaa inaysan xitaa isla markiiba ogaan inay tahay "kaliya" doll dhab ah. Kaliya waxay jeceshahay inay muujiso boobkeeda weyn iyo badhida buurnida. Sameynta dhaqdhaqaaqyo gariiraya oo dadka ka dhigaya kuwo aan la diidi karin waa qurux dhan walba leh iyo soo jiidasho aan caadi ahayn. Tobankii sano ee la soo dhaafay, warbaahinta ayaa ka hadlaysa caruusadaha galmada ilaa m ...
U Sheeg Jaceylka Doll Walaacaaga iyo Dhibaatooyinkaaga
Tani waxay hubinaysaa inaad hesho qiimaha ugu hooseeya iyo adeegga macaamiisha ugu fiican. Waxaan xakameyneynaa qiimaha, qofna wuxuu had iyo jeer diyaar u yahay oo diyaar u yahay inuu ka jawaabo wixii su'aalo ah ee aad qabto. Haa, caruusadaha galmada sidoo kale waxay leeyihiin culeyskooda, marka waad rumeysan kartaa inaad runti la joogtid nin dhab ah. Markaad u sheegto caruus jacaylka walaacaaga iyo dhibaatooyinkaaga, way dhagaysan doontaa sabirka ...
Ka Dhigi Karaa Nolosha Jacaylka ee Dolls Dolls Aad u macquul ah
Caruusadaha galmada ugu quruxda badan (caruusada aan ugu jeclahay galmada waxay iibisaa qiyaastii $ 2,000). Mararka qaar waa inaan tanaasul sameeyaa oo aan wax uun uga raadsadaa miisaaniyad yar, waana ogahay in badan oo idinka mid ahi ay isku mid yihiin. Caruusadaha dhabta ah sidoo kale waxay leeyihiin culeyskooda, taas oo hubineysa inaad ka dhigi karto nolosha jacaylka caruusadaha galmada mid aad u macquul ah. Caruusadda dhabta ah ee noocan oo kale ahi waxay dareemeysaa jilicsan oo diiran oo waa ...
Doll Dhab Ah Oo Jinsi Ah Ayaa Ku Qabsan doona Adigana Kugu raaxeyn doona
Caruusadaha jinsi ahaaneed waxaa loo qaabeyn doonaa faahfaahinta ugu dambeysa si aad dib uguhesho haweeneyda riyadaada. Kama heli doontid nooca caruusadda aaladda galmada ah maktabadda buugaagta dadka waaweyn ee deegaankaaga. Sidan oo kale, way ka badan tahay masturbator. Waxaad ka dooran kartaa caruusad jacayl ururintayada oo kugu soo duubi doonta kuna raaxayn doonta markaad murugooto. Kaliya waxaan ahay nin caadi ah, waxaan jeclahay galmada galmada ...
Aragtida badan ee Dadweynaha ee ku saabsan Dolls-yada galmada ayaa is beddeli doonta
Guska caruusadda galmada sidoo kale waxaa lagu waafajin doonaa rabitaankaaga, oo aakhirka waad la kulmi kartaa dhammaan baahiyahaaga oo aan lagaa horjoogsan. Sababtoo ah dhammaan dhinacyada la xiriira midabka, dhererka, cabbirka iyo dharka indhaha iyo timaha, caruusadaha jacaylku waxay la kulmi doonaan riyadaada riyada ee haweenka. Kordhinta dhabta doll ee caruusadda ayaa kaa caawin doonta bedelida habka ay shacabka u maleeyaan: Galmada macquulnimada badan ...
Horumar Dheeraad ah Beesha Mulkiilaha Leeljaafka ah
Isha farxadeed waxay ka timaadaa qaddarinta dadka kale, sidaa darteed farxaddeedu waxay ka timaaddaa jacaylkeenna iyo baacsiga aan iyada u hayno. Raadinta jacaylka iyo galmada ayaa ah raaxada ugu nadiifsan. Tani, markeeda, waxay soo jiidan doontaa dhagaystayaal ballaadhan, taas oo u oggolaan karta horumar dheeraad ah bulshada milkiilaha doll toosan. Hareerahaaga fiiri oo arag waxa aan bixinno. Fiiri mid kasta oo ka mid ah ...
Qancin Iyo Farxad
Doll Gabar Dhab Ah Waxay Ku Siineysaa Qanac Iyo Farxad Dhab Ah
Iyada oo caruusadaha jacaylka ah, waad isku duubi kartaa oo aad ku raaxaysan kartaa wax badan oo xiiso leh. Waxay kuxirantahay shuruudaha, xitaa waxaad uqaadankartaa avataar kaladuwan Love doll si aad ugu raaxeysato baashaal badan nolol maalmeedka. Jirka jilitaanka caruusadan jinsiga ah waa la iibinayaa hadda, sidaas darteed waa wakhti ku habboon in la qaato. Waa xaqiiqo lama ilaawaan ah oo had iyo jeer ku siin kara qanacsanaan iyo farxad dhab ah. Taabadalkeed, way hinaasi doonaan y ...
Adeeg u heellan Dhallaanka Jinsiga Dhabta ah Ayaa Labaad Uma Jira
Waxaan sii wadi doonnaa inaan si joogto ah ula kulanno tabinta warbaahinta joogtada ah. Waxaan ka dhigi doonnaa dhammaan nidaamka dalabka sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Waxa ugu muhiimsan ee aan ka walwalsanahay waa qanacsanaantaada. Tani aad ayey ugu wanaagsan tahay warshadaha, maadaama laga saarayo ceebeynta ku hareereysan caruusadaha galmada iyo kordhinta aqbalaadda dadweynaha ee lahaanshaha caruusadda galmada waa muhiim. Waxaan ho ...
Doll Wasmo In kasta oo Aad Leedahay Qiimo Iibsi Sare
Tani waa nolol maalmeedka caadiga ah ee aad ku qaadatid Jacaylka caruusadaha. Haddii aad dooratid mid ka mid ah caruusadahaan jinsiga ah ee dareenka badan, kalinimada ayaa dhowaan noqon doonta eraygaaga shisheeye. Lagu sameeyay qalab tayo sare leh iyo silikoon heer caafimaad ah, waad hubin kartaa inay tahay tan ugu fiican nooceeda ee ku jirta galmada dusha caruusadda. Iyada oo leh caruusada galmada ah, waxaad yeelan doontaa xiriir run ah waxaadna noqon doontaa ...
Jinsi ka badan
La noolaanshaha Doll Doll wuxuu ku lug leeyahay wax ka badan galmada
Kulan kasta waa bilow cusub. Waxaan rajeynayaa inaad aragto waxa iigu fiican markasta. Maaddaama warshadaha caruusadaha galmada ay sii kordhayaan la aqbalayo, waxaa la rajeynayaa in caruusadaha jinsiga loo aqoonsan doono inay yihiin hab nabadgelyo leh oo ka baxsan khiyaaliga galmada waxayna ku siin karaan suurtagalnimada raaxeysiga galmada dadka naafada ah. Waad ku kalsoonaan kartaa inaad su'aal kasta oo adiga ...
Kulamo Lagu Qaban Karo Doll Dhab Ah Dhawr Saacadood
Jirkaan waxaad ugu isticmaali kartaa futada, siilka iyo isticmaalka afka. Jidhkani wuxuu ku habboon yahay kuwa leh awoodda keydinta iyo miisaaniyadda xadidan, maadaama aad weli heli karto dhammaan faa'iidooyinka caruusadda galmada adigoon bixin qiimo sare ama ku keydin meelo badan. Haddii aad tahay sawir qaade hiwaayad, waxaad kulamo la yeelan kartaa Real doll dhowr saacadood. Haweeney dhab ah ayaa laga yaabaa ...
Doll Jaceylkaagu Adiga Ayuu Diyaar U Yahay
Xaqiiqdii, caruusadaha jinsi ahaaneed waxaa loo muujiyey inay yihiin antidepressant iyo inay si fiican u fahmaan faa'iidooyinka shucuurtooda. Haddii aad leedahay baahiyo gaar ah ama shuruudo, fadlan si xor ah nala soo xiriir. Waxaan hubin doonnaa inaad heshay caruusadda galmada aad raadineysay. Qofna si adag ugama shaqeeyo qancinta macaamiishooda annaga oo kale. Caruusadaada jacaylku had iyo jeer waa kuu diyaar oo waxay ...
Doll Doll Si Sax Ah U Dooro Noocyada Kala Duwan
Imaatinka guga wuxuu noo ogolaanayaa inaan si wada jir ah dusha ugu dul soconno, oo aan u neefsanno hawada ugu cusub, ugana daba tagno balanbaalista qurxoon. Markiiba cagtaydu way simbiriirixan oo waxaan ku dhacay gacmahaaga. Si kastaba ha noqotee, dadka qaar waxay isticmaalaan wax ka badan oo kaliya halyeey. Gabdhaha yaryar ee jinsiga ah Waxaad dhab ahaan ugu isticmaali kartaa asxaab isla markaana u oggolow iyaga inay sii sahamiyaan. Cuqdada ku xeeran caruusadaha jacaylka waa niyad jab ...
Siilka Doll Wasmo
Siilka Dhalmada dhabta ah ee Siilka Ayaa Nolosha Ku Soo Fool leh
Waxay noqon doontaa qalad weyn in la seego fursad aad ku kharash gareyso mid ka mid ah riyadihii ugu waaweynaa ee galmada ee intaad nooshahay. Qaar ka mid ah macaamiisheenna xitaa waxay noo sheegeen in jacaylka caruusadda indhuhu ay horumariyaan noloshooda dhabta ah. Dameerkan silikoonka ah iyo xubinta taranka haweenka waa sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah, sida haweenka dhabta ah, oo leh faahfaahin yaab leh. Hablahan galmada ee raqiiska ah waa fududahay in la qariyo oo si fudud loo nadiifiyo, a ...
Micnaheeda Lahaanshaha Doll Dhab Ah Oo Jinsiyadeed Dhab Ah Ayaa Noqonaysa Mid Soo Badata Oo Aad Looga Caanyeelo
Waxaan si lama filaan ah ugu fikiray dhawaan in aan doonayo in aan noqdo qof dumar ah oo kula wadaagta nolol qurux badan, taas ayaa i kobcin doonta oo kaa sii waali doonta. Anigu garan maayo waxaad ka fikirayso, laakiin waan farxi lahaa. Shaki kuma jiro in mustaqbalka caruusadaha caruusadaha dhalaalayaa ay dhalaalayaan, sidaa darteed waa xilli xiiso u leh warshadaha. Isku darka soo-gaadhista warbaahinta ee sii kordheysa, technol ...
More macquul ah
Waxyaabaha lagu ciyaaro ee caruusadda lagu galmoodo ee Ragga ayaa ka macquulsan oo dadnimo ku dheehan tahay
Waan ogahay inaan la kulmay xaalad isku mid ah, markaa tan maskaxda ku hay markaad iibsanayso caruusadaha galmada. Caruusadda galmada waxay ninka ka dhigtaa mid xiiso leh oo ku mashquulsan khiyaaligiisa, dabacsanaanta uu u saamaxayo inuu qabto xilal kala duwan oo rag badani jecel yihiin. Tani waa waddo aan lagu seegi karin farxadda galmada, laakiin iyada oo aan la helin dhibaatooyinka kale ee galmada iyo isku dhawaanshuhu keeni karaan. Generatka cusub ...
Xiriirinta Doll Sex
Way Adag Tahay Inaad Joogto Xiriirintan Doll Isku Xirka Muddo
Haddii aad hesho caruusad jinsi ah, waxaad dareemi doontaa gabi ahaanba inaad ku qanacsan tahay galmada. Tani waxay sababi kartaa inaad joojiso raacitaanka haweeney dhab ah oo aad lajoogto doll-kaaga. Sidaa darteed, mustaqbalka fog, caruusadaha silikoonku waa maalgashi dhab ah maxaa yeelay waxay u baahan yihiin dayactir yar waxayna u adkeysanayaan. Ragga safarka badanaa, way ku adagtahay dumarka maxkamada. Fog-fog ...
Saameyn macquul ah
Sababta oo ah caruusadaha jinsiga waxay leeyihiin saameyn macquul ah iyo baashaal
Kuwa doonaya doll silicone macquul ah oo macquul ah, qiimaha wuxuu noqon doonaa dhowr kun oo euro. Intaa waxaa dheer, rag badan ayaa jecel dareenka caruusadaha galmada, iyo sababta oo ah maqaarkooda iyo furitaankooduba waxay u egyihiin haween dhab ah, way qancin karaan rabitaanka caruusadaha galmada. Tani waxay noqon kartaa mid togan ama taban, maxaa yeelay lammaanaha dhabta ah ee haweenka ayaa sida muuqata yeelan doona la talin ...
Siilka Gabdhaha Doll-dhamaadka Sare ee Dareenka Si Dhab Ah
Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira moodooyin la awoodi karo, oo ay ku jiraan caruusadaha jilicsan ama caruusadaha sinta, oo labaduba ku kacaya dhowr boqol oo euro. Tani waa sababta ay ujirto jinsiga galmada, maadaama ay badanaa tahay hab looga takhaluso jahwareerkan hab caafimaad leh. Macno malahan hadaadan cidna dhaawicin. Markaad la galmoodo ilmo - sidee buu dareemaa? Waa yaab. ma dhici karto. Adiga ...
Dhabtii Isla Badmaaxiinta Nederlandka ah waxay u iibisay Dolls-yadooda Jabaan
Qiimaha caruusadaha silikoonku aad ayuu u sarreeyaa. Laabta caruusadda TPE ayaa soo kici doonta oo rogrogmi doonta, taas oo laga yaabo inay tahay arrin go'aamisa rag badan. Intaas waxaa sii dheer, rag badan ayaa raba haweeney dabacsan, mararka qaarna haweeneyda caadiga ah ma sameyso waxa uu ninku doonayo. Sidaad horeba u ogayd, caruusadaha waxay leeyihiin awood ay ku bixiyaan wehel. Iyo, ka dib markii la ogaaday qiimaha t ...
Isbedelada Doll Sex
Waxaan u maleynayaa Doll Doll inuu wax ka badalayo fahamkaaga galmada
Dadka caanka ah ee internetka badanaa waxay u dhaqmaan sida khabiiro qaab nololeed kuwaas oo sare u qaada qaab nololeedka ama dabeecadaha gaarka ah. Waxaan u maleynayaa Cara inay wax ka badali doonto fahamkaaga galmada. Tani maahan buun buunin, kaliya jaleecista goobta ayaa kuu caddeyn doonta. Bal ka fikir sida caruusad jinsi hore u ekaatay. Waa caruusado qarxa oo caag ka sameysan. Kadib sameynta aruurintan ...
Sannado Yar oo Xiga
Sidee Ayuu U Beddeli Doonaa Warshadaha Caruurta ee 'Dex Doll' Sannadaha Soo Socda
Noocyada noocan oo kale ah ayaa iga dhigtay inaan ururiyo tiro badan oo caruusadaha galmada ah (asal ahaan qolka gurigayga oo dhan), markii aan bilaabayna, waxay ahayd wax xoogaa balwad leh. Caruusadaha jacaylka casriga ahi runti hadda kuma khusayso tan. Tani waa caruusad kudayaneysa haween dhab ah faahfaahin kasta. Caruusadan jinsiga ahi wax shaqo ah kuma lahan caruusadaha caagga ah, kuwaas oo aad ugu eg buufinnada t ...
Qofka Nolosha dhabta ah
Waxay Dareemaan Caruus Jinsi Ah Sida Qof Nolol Dhab Ah
Marka la barbardhigo kakanaanta caruusadaha galmada casriga ah, caruusadaha galmada ee tobannaan sano ka hor shaki kuma jiro - laakiin tani sidoo kale ma khuseysaa caruusadaha galmada ee suuqa ku jiri doona 20 sano kadib? Miyaadan u maleyneynin in cudurkeeda uu xoogan yahay? Haddii aad ugu dambeyntii jeclaato, wax badan ayey kaa caawin doontaa. Maxaad u malayn dadka caanka ah ee internetka? Caruusadaha jacaylku waa kuwo macquul ah oo dad badani a ...
Doll Sex waa Mid Ka Mid Ah Waxyaabihii Ugu Kululaa Abid
Baadhitaan iyo fikir badan ka dib, waxaan go aansaday inaan mid iibsado, laakiin waxay ku baxday dinaar, markii ay timidna waxay ka mid ahayd waxyaabihii ugu kululaa abid. Markay dadku ka fekeraan caruusad dhab ah, dad badan waxay ka fikiraan caruusad la buufin karo, oo mararka qaarkood loo yaqaan "aroosadda badmaaxa". Tani ma kugu dhacday adiga? Ma tixgelisay inaad isku daydo caruusad jinsi ah?
Doll-galmoodka wuxuu leeyahay dhakhso badan oo kafiican uguna fiicnaansho iyo horumar
Waxaan hadda ku jirnaa waqti xiiso leh, horumarka iyo awoodaha teknoolojiyadeed ee la xoojiyayna waxay ka dhigan yihiin hal-abuurnimo iyo horumar ka dhaqso badan sidii hore. Super sexy caan ah oo caan ah, oo leh jir la yaab leh, waxay leedahay koox aad u tiro badan oo taageerayaal dhalinyaro ah, aadna u karti badan. Marnaba suuqa ka hor sidan oo kale doll robot galmo macquul ah. Macaamiil badan ayaa xitaa been abuur ...
Jinsi Doll Xirfadle
Aad U Fog Sababtoo ah Doll Doll Xirfadle ama Sababo kale awgood
Dabcan, taasi kuma dhacdo caruusadaha galmada (sidoo kale loo yaqaan "caruusadaha jacaylka"). Kani waa lamaanahaaga marwalba waad la joogi kartaa isaga! Waan jecel nahay waxa aan ku aragno filimada lulataaye, laakiin saaxiibbada iyo baxsadka waxaa laga yaabaa inay diidaan inay aadaan inta maskaxdeenna wasakhdu rabto. Laakiin lammaanahaagu waa ka fog yahay sababo xirfadeed ama arrimo kale awgood, waana inaad hadda keligaa noolaatid. Y ...
Caruusadani waxay badali doontaa warshadaha alaabada lagu ciyaaro ee galmada waligood
Sanadihii la soo dhaafay, caruusadaha galmada waxay ku yimaadeen waddo dheer xagga naqshadeynta iyo kakanaanta. Astaanta cusub ee 'WM doll' waa mid jinsi badan, cabirkeeduna yahay mid layaableh, wax walbana adigaa gacanta ku haya. Dunida caruusadaha galmada waligood isku mid ma noqon doonaan. Maya, waa iska wada mahadsantahay caruusadda kaliya. Boomadan ayaa waligeed beddeli doonta warshadaha toy-ga ah. Ma tixgelinaysaa inaad iibsato ...
Doll Doll Doll wuxuu ubaahanyahay Isbadal sugan Nolol maalmeedka
Haweenku waa makhluuqaad cajiib ah, laakiin mararka qaarkood way niyad jabaan. Waxay noqon kartaa inaadan aqoon inta badan lammaanahaaga, taasoo u horseedi karta hadal la'aan iyo ugu dambeyn dhamaadka xiriirka. Si kasta oo noloshaada galmada ay tahay, qof kastaa wuu yeelan karaa galmo badan ama ka wanaagsan. Waxaad tahay naag adag, laakiin ma waxaad dooneysaa inaad garbaha u janjeerto maalmo yar gudahood? Ama adiga ...
Doll-galmoodka Gorgortanka Gorgortan la'aan
Way fududahay in la keydiyo marka loo eego doll galmood buuxa, waana in ka badan kala bar qiimaha, marka waad ku gorgortami kartaa adigoon wax tanaasul ah sameynin. Caruusadaha galmada waa nooc ka mid ah waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan ee kordhin kara isla markaana sii wadi kara galmada. Waxay caan ku yihiin kali kali iyo dadka afartameeyo jirka ah. Dad badan, fikradda ah yeelashada caruusadda galmada waxay umuuqataa wax lala yaabo. Ka dib oo dhan, waa shay gaar loo leeyahay. Ma ...
Doll Doll wuxuu ku siinayaa madadaalo aan dhamaanayn wakhti kasta
Caruusadan jinsi ahaaneed waa mid si aan caadi aheyn loo qiimeeyay oo ufiican kuwa leh boos keyd xadidan iyo miisaaniyad adag. Indhaha isku qabo oo waxaad xaqiiqdii u malayn doontaa inaad la galmoonayso naag dhab ah. Farqiga ayaa ah in caruusadahaani waligood maya dhaheen. Jaceylka dhabta ah ee jacaylka jacaylka ah ayaa kaa farxinaya. Caruusadaha galmada waa wax macquul ah oo si fudud loo isticmaali karo, dol galmada
La Cayaaro Jagooyin Kale oo Jinsi oo Doll ah
Ugu dambeyntiina uguyaraan, xiriiryada caruusadaha galmada waxay sidoo kale xaqiijinayaan inaad maalintaada kubilaawdo jawi wanaagsan oo aad waxbadan ugaqabato nolol maalmeedkaaga. Haa, la noolaanshaha caruusaddaada jacaylku waxay horumarin kartaa wax soo saarkaaga muddo gaaban. Waad ku ciyaari kartaa adeegayaal, caruusadaha jinsiga eey u eg, ama meel kasta oo jinsi jinsi jinsi ah oo aad jeceshahay waadna ku raaxeysan kartaa ...
Waxyaabaha Dhabta Ah
Caruurta Galmada Ayaa Ka Dhaw Waxyaabaha Dhabta Ah
Markii aan is aragnay, waxaan dareemay midba midka kale garaaca wadnaha, dhunkashada jilicsan, waxaanna galnay muuqaalka quruxda badan ee guga, aniga iyo adiga waxaan bilownay inaan ka buuxno xamaasad. Si joogto ah u hubi kala duwanaanta alaabtayada si aad u hubiso inaan haysano alaabtii caruusadaha ugu dambeysay. Waxaad ka heli doontaa qiimaha isticmaalka badan caruusadda, taas oo noqon doonta maalgashiga ugu fiican ee aad waligaa samaysay. Ma jiraan wax ka dhow ...
Haddii Dharka Doll Doll uu kuu Qurxin karo
Ilaa maanta, waxaa jira laba nooc oo caruusadaha galmada ah, oo ay ku jiraan caruusadaha la buufin karo, kuwaas oo wax ku ool ah oo badiyaa leh saddex god. Qaarkood, waa kuwo macquul ah oo aan laga ogaan karin jirka haweeney dhab ah. Ka fikir galmada qiirada leh. U galmoon lammaane aad jeceshahay oo aad jeceshahay. Horumarka tikniyoolajiyadda sanadihii la soo dhaafay runtii ...
Doll Doll wuxuu helayaa sidaad afka u gasho
Oo ay ku jiraan cidhifyada feeraha xubinta taranka iyo futada, kuwaas oo badanaa caawin kara kuwa lumiyay lamaanayaal muhiim ah, sida dumarka dhintay. Waxay noqdaan kuwo dhab ah oo waxay u noqon karaan hooyooyin ku-meelgaar ah dad badan oo adduunka ah. Kaliya maahan sababtoo ah caruusadaha dhammaadka-sare waxay leeyihiin muuqaal muuqaal muuqaal ah, laakiin sidoo kale sababtoo ah isku xirnaanta shucuurta ah ee aan ka hadlayo a ...
Nolosha Galmada Ugu Fiican
Doll Doll wuxuu yeelan doonaa Nolosha Galmada ugufiican Noloshiisa
Caruusadahaan galmada ugu horeysa waxay kujiraan calal. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxay bilowday inay noqoto qaab farshaxan macno ahaan. Iyo, dabcan, markaad fuudhdo caruusadaha galmada, waxaad heli doontaa nolosha ugu fiican galmada ee noloshaada. Waxaan jecelahay jirdelka caruusadan jinsiga ah oo leh qaybo badan oo wax laga beddeli karo sidaa darteed waxaad xor u tahay inaad iskaa u sameysato. Waa mid jilicsan oo aad u macquul ah in ay dareemeyso sida ...
Gabdhaha caruusada ee galmada ah si ay ula kulmaan hawlahooda galmada
Iibsashada caruusada jinsi ee saxda ah waxay ku sameyn doontaa waxyaabo yaab leh farxaddaada shaqsiyeed. Waad ku qadarin doontaa caruusadda hab dadka intooda badani aysan qiyaasi karin. Waxaad sameyn doontaa xiriir dhab ah waxaadna dhisi doontaa iskaashi dhab ah oo dhexmara adiga iyo iyada. Ku raaxayso silikoonada fasalka caafimaadka si aad u fiican, madadaalo macquul ah iyo waxyaabo lidka ku ah sunta, taas oo macnaheedu yahay lugta iyo cagta d ...
Caruusadan caruusada ah waxay sidoo kale kudayan karaan gabdho badan oo saaxiibo ah
Waxay ka dhigayaan lafdhabarta gariir marka aad dareento sax ahaanshahooda. Maqaarka silikoonku wuxuu leeyahay midab iyo muuqaal isku mid ah maqaarka dabiiciga ah, xitaa wuu soo saari karaa faahfaahinta wanaagsan ee kan dambe (midabka xididdada, areola iyo ibta, midabka bushimaha siilka, dabada). Dadka qaarkiis, caruusadahaan jinsiga ah waxay sidoo kale u ekeysiin karaan gabdho badan oo saaxiibo ah, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan mar dambe rabin gabar dhab ah ...
Xulashada Tooska ah
Doorashada Doll Nolosha Iyo Xulashada Geerida Doorashada Tooska ah
Waxay u keeni kartaa saaxiibtinimo yar, ka caawin kartaa inay noqdaan nihil, iyo markay mashquul yihiin, waxay ka dhigi karaan inay u ekaadaan saaxiib laga yaabo inay halkaas joogaan. Waa inaad si taxaddar leh u barataa caruusadda sida aad u dooraneyso dhakhtarka qalliinka wadnaha. Iibsashada caruusadda galmada ma noqon karto ikhtiyaar toos ah oo loogu talagalay ikhtiyaar nolol iyo geeri, laakiin waa in si taxaddar leh loo darsaa. Waxaa loo yaqaan raaxo ...
Tpe Doll Doll
Kaamil Jaceylka Jaceylka Tpe Galmada Doll ayaa Caawin doonta
Qabo siilka, dabada iyo afkeeda oo dhagan oo tus dhab ahaan waxa ka maqan. Waa wax la beddeli karo, oo sahlan in la isticmaalo, oo si ku habboon u yaal, oo si macquul ah oo ay adag tahay in la iloobo in ay mararka qaarkood tahay caruusad jinsi ah. Caruusadaha Silicone waxaa loogu talagalay inay soo saaraan dareenka iyo dareenka haweenka dhabta ah. Sidaa darteed, waxaa loo qaabeeyey waxyaabo aad isugu eg ...
Beddelka Ku habboon
Sida Loogu Talogalay Doll Doll Xaqiiqdi Waa Beddel Ku habboon
Ragga badan, waxay u ooman yihiin xaqiiqda, laakiin ma doonayaan inay la kulmaan cadaadiska haweenka iyo bulshada. Ragga qaarkiis ma rabaan inay dadka la joogaan, caruusadahaan jaceylka ahna badanaa waxay noqdaan kuwo aan la aqoonsan karin oo runtii noqon kara bedel ku habboon. Haddii aadan waligaa horey u soo iibsan caruusad jinsi ka hor, markaa waxaan kuu sheegi karaa hal shay-inaad ka baratid dusha galmada mooyee ...
U Isticmaal Doll Doll Si Aad U Fuliso Dhammaan Riyooyinkiinna
Waxaa lagugu qabanayaa iyada duufsashadeeda soo jiidashada leh. Caruusadaha silikoonku weligood ma diidi doonaan, waad u isticmaali kartaa si aad u fuliso dhammaan riyooyinkiinna. Tani badanaa waa mid ku adkaata ragga qaarkood oo u baahan inay isticmaalaan, waana sababta ugu badan ee ay ragga u diidaan inay dumarka la xiriiraan. Inaad dhex marto hal qalad qof ahaan (dhab ahaantii dhowr jeer) iyo inaad wax ka barato qaladaadka, taas oo ...
Wasmo Doll Jir Cajiib Ah Hortaada
Haweenka dhabta ah sidoo kale way sameyn karaan galmo. Haweenka dhabta ah badanaa waxay haystaan ​​shandado badan, sida xaaladihii hore, dhacdooyin iyo dhibaatooyin badan. Kaliya maahan sababta oo ah lacagtaada adag ee la kasbaday waxay ku baxdaa caruusad aadan jeclayn, laakiin tan ugu muhiimsan, waad ku jahwareersan tahay inaad heli weydo isku xirnaanta iyo iskaashiyada ay dhammaan caruusadaha guuleysta ka hadlayaan. Mar ...
Sida Jinsiga caruusadaha iyo shurakaduhu u matalaan seddex
Haddii aad ka booddo geeddi-socodka cilmi-baarista oo aad si aan kala sooc lahayn u doorato caruusad, cidina dammaanad kama qaadi karto farxaddaada shaqsiyeed. Xaqiiqdii, waad ka niyad jabi kartaa sidii hore. Jirku wuu fududahay in la keydiyo, la nadiifiyo lana isticmaalo. Way ku fiican tahay isticmaalka kali ama lammaanaha, tani waa sida aan ugu dayanayo seddex iyo seddex jinsi jinsi iyo lamaane. Sidaa darteed, caruusaddu waxay u shaqeyn kartaa sidii loogu baahdo. Iyadoo ...
U Guur Galmo Doll Adigoon La Kulmin Niyad Jabka Shirkadda
Runtii wey weyntahay. Caruusadda galmada waa wax dhab ah in riixitaankeeda iyo dibeddeeda ay tahay wax lagu farxo, dhirbaaxada “maqaarka” ee kuleylka degdegga ahna waxay dareemeysaa wax cajiib ah. Muuqaal ahaan, caruusadaha silicone waxay aad ugu egyihiin dumarka dhabta ah. Sida lafta, waxay ka samaysan tahay bir jilicsan laakiin daxal adkaysi u leh oo lagu dhex daray caruusadda iyada oo loo marayo qaabaynta silikoon. Ninka ...
Heerka Maalgashiga ee leh Doll Doll oo Doonaya inuu Bixiyo
Waxay kuxirantahay heerka maalgashi ee aad leedahay oo aad diyaar u tahay inaad bixiso. Hadda ma ahan nooc isku mid ah doll la buufin karo, waa mid dhameystiran oo culeyskiisu yahay 30 kg. Qalabka caruusadda galmada, waad uga tagi kartaa naagtan dhibaato la'aan. Ragga qaar, laqabsashadu badanaa waa wax laga xishoodo maxaa yeelay waxay la kulmaan isla masiir isku mid ah ama ma xamili karaan ...
Doll Sex ayaa halgan ugu jirtay sidii ay ku heli laheyd haweeneyda dhameystiran
Waxaa laga yaabaa in muddo dheer, ay isku dayayeen inay helaan haweeneyda kaamil ah, laakiin ma awoodaan, maxaa yeelay tani maahan waxa ay heli karaan. Mararka qaar way adagtahay in la helo waddo looga baxo, laakiin rag badan ayaa badanaa adeegsada caruusadaha silikoonka. Caruusad jinsi ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'doll love', waa toy galmo oo la mid ah aadanaha dhabta ah ee loo isticmaalo siigaysiga. Haddii aad haysato miisaaniyad aasaasi ah oo dhab ah, ...
Qofka dhabta ah
Caruurta Galmada Waxay U Muuqdaan Qof Dhab Ah
Waxay ku bartaan tijaabo iyo qalad, laakiin mararka qaarkood aad ayey u xanuun badan tahay. Ilaa hadda, waxaan soo iibsaday ku dhowaad darsin caruusado, oo iibsasho kasta, waxaan dareemayaa kalsooni badan. Markaad iibsanayso doll hada, marna ma dareemi doono gudaha iyo shaki. Waxaa jira xulashooyin badan, laakiin waxay kuxirantahay baahiyahaaga iyo lacagta aad qarashgareyn karto. Doll Silicone waa doll macquul ah, ...
Caruusadaha galmada waxay ku raaxeystaan ​​jirka
Haddii lugahaaga iyo lugahaagu ay kala furaan jirkaaga, markaa raadi wax daboolaya baahiyahaaga, oo hadday kaliya tahay dameerka iyo siilka aad rabto, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay boombalaha galmada ee jirka. Waxay ku siin doontaa adeegyo inta jeer ee aad u baahato waxayna kuu keeni doontaa madadaalo oo dhan. Intaa waxaa dheer, waad ku xiran kartaa dhar iyo lebbis. Ragga sidoo kale waxay badanaa aaminsan yihiin in dumarka dhabta ahi ay ...
Shirkad sumcad leh
Ka iibso Doll Doll Shirkad sumcad leh
Ujeeddadu waxay ahayd in la daboolo baahiyaha galmada ee ciidanka Jarmalka xilligii duulaankii Naasiyiinta ee Yurub. Aniga oo quus ka taagan caruusadda galmada, waxaan ka iibsan doonaa oo keliya shirkadaha sumcadda leh, maxaa yeelay marar badan, caruusadaha jinsiga ee raqiiska ah ee shirkadaha yar-yar ayaa caan ku ah waxyeello iyo sun. Dhamaan qalabka galmada aan ku ciyaaro 100% waa aamin. Waa inaad hubisaa tijaabooyinkan si aad u aragto inay run yihiin oo aysan ahayn ganacsi ...
Caruurta Galmada Ma Caawin Kartaa Rag Badan Oo La Kulma Qalalaasaha Dhisida Xiriirrada
Muddo dheer kahor intaan la iibin, caruusadaha silikooniga ah ayaa la tijaabiyay si loo arko inay la kulmeen heerarka loo baahan yahay (taabashada, dareemida, iwm.). Uma baahnid inaad la qaadato si aad wax u cuntid, mana aha inaad la macaamisho sodohdeeda ama saaxiibbada ugu fiican ee neceb geesinimadeeda, maxaa yeelay macno ma samaynayso. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay ka caawin kartaa rag badan oo la kulma jahwareer dhisida xiriir ...
Tijaabi caruusada galmada si aad u hubiso inaad wax u iibsato
Marka u daaweyso xulashadaada iibsiga caruusadda si la mid ah sida aad u iibsatid baabuur-qaadatid waqti aad ku doorato, qiimee faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka kasta - oo dalbo amar! Badanaa caruusadaha galmada waxay la yimaadaan xirmo dayactir bilaash ah, si kastaba ha noqotee, iska hubi inaad had iyo jeer isticmaasho saliida saliidda, nadiifi boombalaha galmada, si fiican u keeyso caruusadda galmada, oo hubi inay keydsan tahay iyadoo aan ...
Xuquuqda Dex Foll
Doorashada Saxda ah Dex Foll Marwalba Ma Fududa
Sida magaca "caruusadaha jinsiga" laftiisu ay muujinayaan, waxaa loo allifay ugu horreyn in lagu qanciyo rabitaanka galmada ee milkiilaha. Daryeelka waxyaabaha aad ku ciyaareyso galmada waa muhiim si loo hubiyo inay sii socoto sanado badan adoon soo saarin wax ilmo ah. Waxaad u oggolaan kartaa inay jilba-dhigato, jilciso, ama jilbaha jilciso, adiga oo kugu tiirsan Si kastaba xaalku ha ahaadee, badanaa way ku adag tahay nin, haddii aad ju ...
Tayo sare leh Doll Doll Iyo Dhamaad Dhamaystiran
Caruusadaha silikoonku waxay hanan karaan jagooyin kala duwan si loo hubiyo inaad leedahay baashaal kala duwan. Waxay sidoo kale sameeyeen horumar ballaaran tan iyo markii la abuuray. Maanta, caruusadaha badankood waxay leeyihiin laba nooc oo maqaar oo kala duwan, midkoodna waa macquul oo wuxuu ku faafi karaa jirka oo dhan. Taa baddalkeeda, caruusadaha jinsiga ah waxaa ikhtiraacay badmareeno keli ah oo reer Holland ah oo khiyaano leh qarnigii 17aad. Ka dib oo dhan, ...
Naag Dhab Ah
Oo Doll-galmo Waxay U Muuqataa Haweeney Dhab Ah
Dabcan, waad ku seexan kartaa meel u dhow, laakiin mararka qaarkood nin kaliya ayaa doonaya inuu si dhakhso leh u furto. Jacaylka caruusadaha, sida caadiga ah waxaad tahay xalka saxda ah maxaa yeelay waa kuwo aad u macquul ah waxayna umuuqdaan dumar dhab ah. Tani waa waxa dadka qaar dhahaan. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay in dad badan oo ka duwan, Hitler laga yaabo inuusan soo saarin caruusadaha galmada. Si kastaba ha noqotee, haddii uu doonayo caruusad gibi kara ...
Markaas TPE Doll Doll wuxuu xallin karaa dhibaatada
Jacaylka caruusadaha, laakiin waxaad u sheegi kartaa inaysan dibadda joogin, la qabsan karin shukaansiga, isla markaana aysan la joogi karin lamaanayaashooda. Si tan wax looga qabto, Hitler wuxuu caruusadaha galmoodka siiyay naafada Naasiga, isaga oo meesha ka saaray baahi kasta oo askartu u lahayd inay sahamiyaan xubinta taranka caalamiga ah. Markii la weydiiyay bal in la iibsado doll TPE ama doll doll, xulashadu waxay ku saleysnaan doontaa baahida t ...
Wuxuu Ubaahanyahay Doll Doll Waqti Keliya Iyo Tamar
Xiriirka dadka dhexdiisa ah wuxuu u baahan karaa waqti iyo tamar uusan qofku lahayn. Ragga qaarkiis, waxay umuuqataa wax qariib ah inaad dooratid caruusad jinsi oo dhab ah haweeney. Haddii askartu bilaabaan inay uur qaadaan haweenka reer Yurub, carruurtooda ayaa qasab ku noqonaysa inay isku qasmaan. Aragtidayadu waxay ka bilaabmaysaa dhinaca muuqaalka, hawlqabadka, oo waxay dhex maraysaa caruusado lahaa pr ...
Nolosha Galmada ee aan la ilaawi karin
Doll Doll ayaa balan qaaday inuu yeelanayo Nolosha Galmada ee aan la iloobi karin
Lix waxyaalood oo aad sameyn kartid si aad u galbiso Los Angeles ama meel kasta ayaa xiiso leh. Wejigeeda quruxda badan waxaa ku xardhay farshaxan yahan khibrad badan leh. Caruusadahaani waxay kuu keenayaan khibrad aan horay loo arag. Marnaba ma arki kartid guduudka dharka hoosta, laakiin caruusadaha silikoon ayaa kaa dhigi doona adiga. Xaqiiqdii, waxay la timaaddaa taxane ka kooban waxyaabaha ugu xiisaha badan. Caruusada galmada p ...
Wax Badan Waxaad Ku Qaban Kartaa Doll-kaaga Galmada
Wadanka xaasaska badan leh, dadka doorbida guurka badan halkii ay ka doorbidi lahaayeen masruufka ayaa ragga aad uga xumaada. Caruusadaha galmada waxay ka mid yihiin walxaha ragga casriga ah "raadinta farxadda". Baahida suuqa ee sii kordheysa, tayada caruusadaha galmada ayaa si weyn kor ugu kacay. Marka la eego qaabka iyo taabashada, tani waa nolosha dhabta ah dad badana si raaxo leh ayey ula yaaban yihiin. Afte ...
Silicone macquul ah
Doll-galmoodka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay Silicone-ka ugu macquulsan
Warshadaha Shiinaha, caruusadaha waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo rabitaanka macaamiisha. Hadda waxaad fursad u leedahay inaad naqshadeyso caruusaddaada galmada. Caruusadan dhabta ah ayaa ka duwan caruusadaha kale ee qiimaha iyo tayada leh. Maanta, bulshadan dhexdeeda, waa inaad lacag badan ku bixisaa si aad u daryeesho lammaanahaaga inta lagu jiro iyo ka dib xiriirka. Ilmahaaga, xitaa xayawaankaaga, ...
Doll-ka Jinsiga ah wuxuu ka dhigayaa Moodooyinka Shaqada kuwo Xaqiiqo badan
Redheads waxay leeyihiin sumcad aad u fiican, "sii wadid" waa mid aan ka reebanayn. Waxaan la yaabanahay haddii aad hadda ogtahay? Si loola dagaallamo sawir-gacmeedka, barnaamijyo badan oo bulsheed iyo barnaamijyo wax laga iibsado ayaa mamnuucaya sawir-gacmeedka, laakiin caruusadaha jinsigu maahan inay yihiin kuwo qaawan! Weligaa ma qorsheysay inaad leedahay caruusad jinsi ah? Hadday sidaas tahay, keligaa ma tihid. Sida laga soo xigtay warbixinnada, caruusadaha galmada waxay noqdeen am ...
Doll Sex waxay leedahay wax walboo aad ubaahantahay si ay kaaga farxiyaan
Dadka badankood wax culus kama qaataan madadaalada, laakiin waa inay qaataan. Waxaan ku noolnahay waqtiyo walaac leh. Qaadashada waqti si aad u nasato waa muhiim, oo shaqaalaynta wehel waa hab deg deg ah oo sahlan oo lagu hubiyo in qof nasasho iyo madadaalo leeyahay. TPE waa nooc cusub oo silikoon ah oo la kala bixin karo ilaa 5.5 jeer ka dheer waana mid aad u jilicsan! Waxaa la tijaabiyey inay ammaan u tahay aadanaha. The ...
Garbaha laga saari karo
Caruurta Galmada Awood U Leh Inay Istaagto Oo Ay Leedahay Garbaha La Saari Karo
Haddii aadan si dhow u eegin, waxaad u maleyneysaa inuu yahay qof dhab ah. Taasi waa sababta, xitaa iyada oo saaxiib ama xaas, ragga badankood ay soo jeestaan ​​oo ay eegaan dumarka soo jiidashada leh. Taasi waa sababta ay indhahaagu ugu dhegan yihiin moodooyinka dumarka ee dharka galmada. Waad dooran kartaa midabka indhahaaga, manicure-kaaga, iyo haddii tusaalahu awood u yeelan karo inuu istaago oo yeesho "garabka dhaqaaq", ...
Maqaarka Doll Doll sidoo kale waa lagu dayactiri karaa Tiknoolajiyadda ugu horumarsan
Kala-goysyada bini’aadamka waxaa laga sameeyaa bir macmal ah iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee xirfadeed si loo hubiyo in addimada ay si xor ah u kala bixin karaan si ay u abuuraan muuqaallo kala duwan. Muuqaal ahaan, caruusaddu waa qumman tahay, xabadka ayaa xoog badan oo aad u jilicsan. Sida miskaha, waxay si gaar ah u wareegsan yihiin, aad u xoog badan yihiin oo jilicsan yihiin. Sida caruusadaha galmada ee hadda jira, muuqaalka uma dhowa oo kaliya ...
Caruurta Galmada Hel Saaxiib Maxalli ah
Waxay soo baxday in caruusadahaani ka samaysan yihiin walxaha silikoonku kaliya qurux iyo soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale waxay aad ugu egyihiin soo jiidashada iyo dabeecadda dadka dhabta ah. Jaleecada hore, si dhib leh uma arki kartid inay tahay wax carrab la '. Ulasoco safarada madadaalo aan qorsheysneyn. Weligaa ma soo gashay magaalo cusub oo aad wax ka baadho oo aanad garanayn waxa la sameeyo? Wehelinta ayaa ah hagayaasha ugu fiican! By Caweyska Dalmar
Doll Doll Xaqiiqdi Waa Ikhtiyaarkaaga Fiican
Haddii aadan rabin inaad ka walwasho jacaylka iyo dhammaan kharashaadka, qalabka galmada waa hubaal xulashadaada ugu fiican. Masruufka kaliya ee loogu talagalay caruusadaha galmada waa meel bannaan oo habboon oo lagu nadiifiyo loona isticmaali karo si joogto ah. Markii aan aragnay caruusadda, waxaan isla markiiba ogaanay inaan la macaamilayno alaab heer sare ah. Xaqiiqdii, ma jiraan wax iin ah oo wejiga ka muuqda, waxyar oo Aasiya ah, mid caadi ah, qurux ...
Doll-galmoodka ayaa dooran kara Midabka Ibta nafsadeeda
Caruusadaha galmada waa sida cinjirka galmada aan inta badan helno. Waa alaab waaweyn. Shuruudaha qaarkood waa caadi oo laguma sharixi karo waxyaabaha qaawan. Horumarkaan waxaa loo aaneyn karaa dhowr arrimood, oo kuwa ugu toosan ay yihiin cabirka maskaxda. Maskaxda ragga ama dumarka waxay kuxirantahay qadarinta qaababka aadanaha. Markaad dooranaysid galmo d ...
TPE Doll Doll jilicsan Doll Doll Adkayn doonaa
Maqaarka jilicsan ee jilicsan ayaa umuuqda mid jilicsan oo gacmaha is qaban kara. Layaab ma leh taxanahan caruusadaha galmada waxaa kaloo loo yaqaan "silsilado silikoon". Dabeecadda jilicsan runtii waa qurux badan tahay sida cirfiid. Si kastaba ha noqotee, hagayaasha dalxiisku ma bixin karaan ku dhowaad hal-hal-fiiro, ama xitaa ma bixiyaan wax dareen ah gabi ahaanba. Waxaad noqon doontaa koox oo kaliya waxaad booqan doontaa dabinnada dalxiiska ee caanka ah. Taasi waa wa ...
Caruurta Galmada Oo Noqotay Haweeneyda Riyada Ah
Tani waxay ku siinaysaa fursad qaas ah oo aad ku uuraysato haweeneyda riyada ee aad rabto inay noqoto. Isticmaal alaabta lagu ciyaaro galmada adiga oo aan ka walwalin ka hortagga uurka. Lamaanayaal badan ayaa u maleynaya inay ka hortag uur yeeshaan markay galmo sameynayaan, ugu dambeyntiina saaxiibadood ayaa uur yeelata Kondhomku wuu dillaacay ama haweeneyda ayaa loogu talagalay inay uur yeelato. Marka la eego maaraynta, caruusadu waa mid aad u ...
Waxaad u Baahan Tahay Daryeel Badan
Wigyada Caadiga ah ee la yimaada Dollsyada Galmada ee Bilaashka ah waxay u baahan yihiin daryeel dheeraad ah
Eyga eygu waa midka aan kugula talin lahaa, waxaadna si fudud ugu isticmaali kartaa inaad dareento naasaheeda. Dad badan oo doonaya inay iibsadaan markii ugu horeysay, labaduba way xiiseeyaan oo way baqayaan maxaa yeelay ma garanayaan sida loo isticmaalo ama loo iibsado. Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay dumarka soo bandhiga qaabab lab ah laakiin aan caawin karin laakin u bogayaan farshaxannada muruqyada. U baahan daryeel ka badan t ...
Doll Jinsi Ayaa Dareemo Sida Naasaheeda U Weyntahay
Kuu raacayo safar aan qorsheysneyn ayaa ah habka ugufiican ee si buuxda loogala kulmo dhammaan meelaha aad tagto! Caruusadaha silikoonka badanaa waxay dareemaan xoogaa adag, halka caag TPE jilicsan uu aad u jilicsan yahay. Dabcan, caruusadaha silicone sidoo kale waxay noqon karaan kuwo aad u jilicsan, laakiin kharashka ayaa wax badan kordhin doona; xoogga aad ku sidato ayaa hubaal kaa dhigi doonta adiga oo aan dhaqdhaqaaq lahayn. Iyada oo leh, se ...
Wadada Ugu Dhaqsaha Badan
Doll Sex waa Xitaa Wadada ugu Dhaqsaha badan
Qaloocinta laabteeda deeqsinimada leh iyo qaabkeeda ayaa na siinaya aragti yar oo ah waxa aan qaban karno, taas oo ah, wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Waxa ugu yaabka badan ayaa ah in caruusadahaani si wanaagsan loo qaabeeyey oo aysan jirin wax ay dhahaan. Ka dib markay xidheen dhar qurux badan, waxay isu ekeysiinayaan sida album sawir qurux badan! Waxay yaqaaniin naadiyada ugu fiican, xeebaha ugu nadiifsan, wax yar oo la cuno ...
Abuuraha Jinsiga ee Jinsi ayaa Muujin kara Sifooyinka Qofka Fiican
Maaddaama ay tahay caruusad gacan-ku-sameys ah, waxay u dhowdahay inaysan lahayn wax cillad ah. Waxay qaadatay saacado in la sameeyo. Intaa waxaa dheer, culeyskiisu waa 20 kg oo keliya, qalfoofkeeda birta ahna waa mid jajaban oo aad u habboon. Waad uga tagi kartaa sariirta hoosteeda, qolka hoose ama hoosta hoose, ilaa iyo inta aad u malaynayso inaan cidina ku siibi doonin. Alaabtaada meesha. Taaladahan ayaa u suurta gelinaya abuurayaashooda inay muujiyaan tayada ...
Doll caag ah
Waxqabadka Doll Jinsi ayaa Ka Fiican TPE Doll Doll jilicsan Doll Doll
Ma jeceshahay inaad wax ka cunto dibadda? Haddii aad jeceshahay cunnada qalaad oo aad jeceshahay inaad isku daydo suxuun cusub, waxay noqon kartaa madadaalo inaad isku daydo makhaayad cusub oo ay weheliyaan wehel. Caruusadaha silikoonku waxay kafiican yihiin caruusadaha galmada ee TPE caruusadaha caaga ah ee jilicsan. Maaddaama maaddadu ay xoogaa adag tahay, waxqabadka ayaa ka sii fiicnaan doona. Qaar ka mid ah gacmo jilista iyo faahfaahinta waxaa matali kara kaliya silikoon se ...
Galmada Doll Sex waxay kuu keeni doontaa Baashaal badan
Dhaq isla markiiba dhallaankaaga ka dib galmada. Tani waxay badanaa u baahan tahay in shahwada laga soo jaro madaxa. Marka loo barbardhigo adeegsiga caruusadaha la buufin karo ama caruusadaha silikoon-dhamaadka hooseeya, galmo la yeelashada caruusadaha noocan oo kale ah ee quruxda badan waxay kuu keeni doontaa xiiso badan Runtii, wax walba si taxaddar leh ayaa loo qorsheeyay si ay kaaga farxiyaan. In kastoo aan ka ogahay qalbiga inay yihiin kaliya jinsi d ...
Jinsiga Robot Version
Doll-galmood wuxuu keenay Nooca Robot-ka
Tusaalooyinka noocan oo kale ah ee farshaxannimada waxaa ka mid ah taallada David ee uu sameeyay Michelangelo sanadkii 1504 iyo taalada addoonta Griigga ee Giraanta ah ee uu sameeyay Hiram Bowers sanadkii 1843. Sidoo kale waxay la timid nooca galmada aaladaha galmada, laakiin sidoo kale waxay la timid heerkulka jirka, nidaamka codka iyo caqliga macmalka ah. , taas oo macnaheedu yahay inaad la sheekaysan karto moodeelka. Caruusadaha galmada malaha ehelkaa ...
Doll-galmoodka Ayaa Ku Qarin Kara Guriga
Waxay sidoo kale dareentay wax cajiib ah, ma aqaano inay sabab u tahay naasaheeda weyn ama booskeeda. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay leedahay siil aad u fiican, futada iyo af aad u jilicsan, umana caajisi doontid. Qof kastaa wuxuu leeyahay markii ugu horreysay. Haddii aad ka walwalsan tahay in qof ogaan doono sirtaada yar, waad ku qarin kartaa gurigaaga. Qarniyo badan, dadku waxay samaynayeen oo iska leeyihiin ...
Horumarku wuu hagaagayaa
Xiisaha Doll Jinsi wuu Kordhinayaa Markuu horumarku hagaago
Caruusadaha jinsiyeed waxay kuu oggolaanayaan inaad sifiican u habeysid dookhaaga si aad u kordhiso qaddarintaada foomka aadanaha. Kuwa jecel dhabta ah waxay ahaayeen mawduuc ay indhaha ku hayaan mudada dheer warbaahinta adduunka oo dhan. Sanadihii la soo dhaafay, dadku waxay ahmiyad gaar ah siinayaan iibinta caruusadaha galmada iyo kuwa dhabta jecel, waxaana laga yaabaa inaan aragno kororka xiisaha sanadihii la soo dhaafay si loo hagaajiyo ...
Doll sex-ka waa nadiifi oo sanduuqa ku rid
Waxaa si fudud loogu isticmaali karaa galmada afka, galmada dabada iyo galmada caadiga ah. Qaabkani waa hubaal inuu ka farxiyo madax-cas. Caruusadaha galmada sidoo kale si fiican ayaa loo keydiyaa Kaliya waxaad ubaahantahay inaad nadiifiso kadib markaad isticmaasho oo aad ku rido sanduuqa. Aragtidani waxay khusaysaa lahaanshaha caruusadaha galmada. Adiga, milkiilaha, ayaa dooran kara qaabka caruusadda jinsiga ee sida ugu fiican uga tarjumaya astaamahaaga habboon.
Shirkadda Doll Doll Waxay Ku Fiican Tahay Casho
Haddii aad u safreyso ganacsi, ama aad ogaanayso in saaxiibbadaada midkoodna uusan si gaar ah tijaabo u ahayn, wehelnimadu waa taariikhda cashada ugu habboon. Caruusadaha silikoon waxaa loo kala bixin karaa seddex ilaa shan iyadoo la raacayo qaaciidooyin kala duwan, halka caruusadaha jilicsan ee TPE la kala bixin karo lix ilaa sideed jeer. Sidaa darteed, cinjirka jilicsan ee TPE wuxuu leeyahay xoog xoog jiidasho iyo wax badan ...
Caruusadaha Galmadu uma muuqdaan inay dammaanad qaadayaan Xaaladda Haweenka Mustaqbalka
Naasaheeda ayaa si qurux badan u qalooca oo aad u xoogan, faahfaahinta siilka iyo dabada si fiican ayaa loo soo saaraa. Darbiga gudaha ee dambe waa mid jilicsan oo jilicsan, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in laga faa'iidaysto dhammaan jihooyinka la heli karo. ma u qalantaa Gosh, caruusadahaan jilicsan kaliya maahan "toy". Waxay u qurux badan yihiin gabdhaha anime ee ka ...
Doll Doll ayaa ka fogaan kara dhibaatooyinkaas
Sidan oo kale, shaqooyinkan farshaxan ee aadka u quruxda badani waxay dadka ka dhigi karaan inay si fiican isu milicsadaan naftooda. Cid ka jawaabi kartaa ma jirto. Su'aashaada. Waxay qaaddaa kuleylka jirka ee dhabta ah, looma baahna in la yiraahdo waxay leedahay qaybo jirka ka mid ah oo dhaqdhaqaaqa. Gudbinta galmada gabi ahaanba waa amaan. Fayrasyo ​​fara badan ayaa lagu soo saaraa galmada, waxaana badanaa la sheegaa in laga kala qaado virus ka kale loona gudbiyo qoor kale ...
Doll Wasmo Sida Ugu Fiican Ee Loola Kulmo Dhammaan Meelaha Aad Tagto
Wadanka xaasaska badan leh, dadka doorbida guurka badan halkii ay ka fiicnaan lahaayeen dayactirka ayaa ragga aad uga xumaada. Waxay yaqaaniin naadiyada ugu fiican, xeebaha ugu nadiifsan, sayidyaqaannada cuntada sida loo yaqaan, iyo xitaa waddooyinka ugu dhaqsaha badan. Kuu raacayo safar aan qorsheysneyn ayaa ah habka ugufiican ee si buuxda loogala kulmo dhammaan meelaha aad tagto! Faraqa qiimaha: Qiimaha ceeriin m ...
Caruusadahaan galmoodka ah ayaa ka mid ah caruusadaha ugu fiican suuqa
Laga soo bilaabo maalinta ugu horreysa ee iibsashada, alaabada galmada ayaa gebi ahaanba baabi'iyay xaaladdan. Ma aha inaad ka shakido oo aad walwasho. Tani miyaanay ahayn sababta ugu wanaagsan ee loo iibsado qalabka galmada? Haddii aad tahay aqoonyahan ah caruusadaha galmada, caruusadan waa mid ka mid ah caruusadaha ugu fiican suuqa. Laakiin kuwa dareema inay aad qaali u yihiin, waxaa sidoo kale jira jirdil loo yaqaan 'torso doll'. Cunugaaga, xitaa xayawaanka, s ...
Doll Doll wuxuu buuxiyaa baahiyaha isku dhawaanshaha jirka
Caruusadaha caruusadaha waxay ku siinayaan sahlanaan weyn haddii aadan la joogin xaaskaaga, saaxiibtiis ama saaxiibtiin muddo dheer. Shaqooyinka ayaa kugu qasbi kara inaad u guurto magaalo cusub, gobol ama waddan cusub. Emailka, taleefanka, iyo adeeg bixiyaasha fariimaha waxay buuxin karaan baahiyaha isgaarsiinta ee adiga iyo kuwa aad jeceshahay, baahida loo qabo in lala kulmo isku dhawaanshaha jirka badanaaba waa dhibaato ...
Miisaanka Doll ee Jinsiga wuxuu kuxiranyahay farshaxanka iyo heerka safafka ee soo saaraha
Xitaa waad tagi kartaa makhaayad bixinaysa cunno macmal ah oo aadan aqoon u lahayn oo aad u qaadan karto heerka ku xiga. Waxay noqon kartaa madadaalo in la ogaado, gaar ahaan marka aad leedahay wehel qurux badan oo hareerahaaga ah. Caruusadaha silikoon ee isku cabirka ah ayaa ka miisaan badnaan doona caruusadaha TPE, waxay kuxirantahay farshaxanka soo saaraha iyo heerka dahaarka. Laakiin hadaad rabto ...
Doll Doll wuxuu kufiican yahay dalbashada ragga
Kondhomyada cinjirka qaarkood waa hab fiican oo looga hortago infekshannada galmada lagu kala qaado, laakiin gabi ahaanba ma baabi'iyaan suurtagalnimada infekshinka. Waxaad heli doontaa caruusad qurux badan, diyaarna u ah inay kugu qanciso quruxdeeda. Sidaa darteed, caruusadaha jinsiyeed waxay ku habboon yihiin ragga dalbanaya. Caruusadaha galmada uma baahna dayactir. Maanta, bulshadan dhexdeeda, waa inaad ku bixisaa lo ...
Wadaage daacad ah
Doll Doll Dhab ahaan Waa Lamaane Daacad Ah
Dhinaca kale, waxaad ku iibsan kartaa caruusad jinsi oo cabbirkoodu dhan yahay ku dhowaad kalabar qiimaha caruusadda, caruusadaha jinsi ahaana waa hubaal lammaanayaashaaga daacadda ah maxaa yeelay iyagu adigaa iska leh. Haddii aad u safreyso ganacsi, ama aad ogaanayso in saaxiibbadaada midkoodna uusan si gaar ah tijaabo u ahayn, wehelnimadu waa taariikhda cashada ugu habboon. Caruusadda galmada ee silikoonku waa mid kacsan ...
Caruusada galmada sidoo kale waxay kaa ilaalinaysaa inaad khiyaamayso xaaskaaga
Baakadaha kore ee caruusadaha jinsiga ee hadda jira ma soo bandhigi doonaan macluumaadkaaga. Haddii aad ku nooshahay guri dabaq ah oo aadan rabin deriskaaga inay ogaadaan inaad soo iibsatay wax aad u sarreeya, waxaad dooran kartaa goob iskiis u sheegta, oo iska ilaalin karta qasaarooyin badan. Doll-galmoodka jinsigu wuxuu baabi'iyaa madax-xanuunka qancinta libido-kaaga markaad ka fogaato lamaanayaasha muhiimka ah ...
Dhawaan Lagu Taliyay